トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ card Saison olujikelezayo ngetyala | ezifana inzala yikomishoni ukubala, iinkcukacha inkonzo
Xa ikhadi Saison, enoba ukhankanye isixa semali okanye izavenge phezu counter, uyakwazi ukutshintsha ku olujikelezayo lamatyala kamva Ngokusebenzisa i "utshintsho ribonucleic". Kungenzeka kwakhona ukutshintsha kuphela inxalenye yentlawulo zemigaqo, ubizwa ngokufanelekileyo ngokusebenzisa intlawulo esisixa-mali, izavenge, olujikelezayo ngetyala ngokungqinelana ubukhulu iindleko.
Kwakhona, usoloko baxhotyiswe njenge "Declaration ribonucleic" Kwakhona iinkonzo baphathwa njengabantu olujikelezayo ngetyala, Ngokusebenzisa le nkonzo, awufuni ukuba itshintshwe lonke ixesha xa ajikelezayo ngetyala. Ezifana ixesha bonus, kuba xa kukho igumbi indlu kusenokwenzeka ukuba 'ukwandisa esisixa-mali pay-ngokupheleleyo intlawulo ", eyenza kube lula ukulawula ukusetyenziswa eseleyo kunye nentlawulo status.
Saison card olujikelezayo letyala khosi yesi-3
Saison khadi, indlela intlawulo olujikelezayo ngetyala iye khosi yesi-3 iyafumaneka. isixa sentlawulo yenyanga kumiselwa ngokungqinelana kunye nemali ekhoyo i "khosi eqhelekileyo ixesha elide", nezokubaza iintlawulo zenyanga kwi yakho, "ikhondo ngqo-umgca".
Phakathi lwexesha elide kunye ikhondo standard, kokukhona sebenzisa intsalela, kungona iintlawulo zenyanga. Ubuncinane intlawulo (sebenzisa imali 1 yen - 60,000 yen), 3 ngexesha ixesha elide, 000 yen, umiselwe ukuba ukususela yen 10,000 kule khosi eqhelekileyo.
kukhokelela abathintela umthwalo yenyanga ukuba usebenzise indlela ixesha elide, kodwa welula ixesha layo intlawulo minute. Ukuba kuza wathatha izinga lenzala ikhomishini ngokungqinelana kwisithuba yentlawulo e olujikelezayo ngetyala, abo bafuna ukunciphisa iintlawulo ukuhlawula, kokukhona kwekhosi standard sifanelekile kakuhle.
ethe ngqo Kakade ke, kungakhathaliseki ukuba imali ekhoyo, le yindlela ukuba ahlawule nyanga nganye isixa semali ukuba izicwangciso zam. Iintlawulo lubekwe yen 10,000 yen 30,000 okanye ngaphezulu.
eyeleleneyo | iindlela intlawulo oluphakathi kunye notshintsho ikhondo ngetyala esijikelezayo kunokwenzeka? Inkqubo? (General Theory)
umyinge wenzala ikhomishini iya kuthatha malini? Kuba iimali umyinge wenzala
ikhadi Saison, kuxhomekeke kuhlobo nezifundo kwikhadi. Xa ikhadi Saison eqhelekileyo, nayiphi na intlawulo yonyaka yokwenene kwakhona akhethe ikhondo yi "14,52 ekhulwini". Kwi-Gold Card Saison, "9,60 ekhulwini" kwimeko kwekhosi umgangatho, kwimeko ikhondo ixesha elide, ikhondo ethe ngqo iya kuba "12.0 ekhulwini".
iyafana ikhadi jikelele umyinge wenzala ikhomishini of the ukubala, iye ibalwe i "ukusetyenziswa isixa semali x zinga wokwenene." Ekubeni yonyaka yokwenene libhekisela ngomyinge wenzala we izinga lenzala isicelo kunyaka-1, ixesha elifutshane, ixesha lokuhlawula, oko kuya kukhokelela ekubeni ukucinezela uthumo izinga lenzala. Umzekelo, usebenzisa 100,000 yen credit olujikelezayo kwekhadi Saison oluqhelekileyo, kodwa kuya kuthatha imali bababuyekezele ngamnyaka mnye "100,000 × 14,52% = 14.250 yen ', bababuyekezele kwisiqingatha sonyaka" 100,000 × 14,52% ÷ 2 = kuya kuba owayeze \_ 7.125. "
reference | Xa site web yomdla olujikelezayo ngetyala ngokubanzi (ikhomishini), amaqondo enzala
Saison, ekubeni kusenokwenzeka ukuba usebenzise yokulinganisa intlawulo, silwe Ukuba ufuna ukwazi iintlawulo ngqo Makhe ufumane. Kuyinto 52 ekhulwini ". Kwi-Gold Card Saison, "9,60 ekhulwini" kwimeko kwekhosi umgangatho, kwimeko ikhondo ixesha elide, ikhondo ethe ngqo iya kuba "12.0 ekhulwini".
Saison, ekubeni kusenokwenzeka ukuba usebenzise yokulinganisa intlawulo, silwe Ukuba ufuna ukwazi iintlawulo ngqo Makhe ufumane. Kuya kuba imali yen 125 ".
Saison, ekubeni kusenokwenzeka ukuba usebenzise yokulinganisa intlawulo, silwe Ukuba ufuna ukwazi iintlawulo ngqo Makhe ufumane.